Dibad-bax kasocda KM4 iyo xabado ka dhaaya goobta. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dibad-bax kasocda KM4 iyo xabado ka dhaaya goobta.
Ahmed weheliye Gaashaan 11 June 2018 11 June 2018
Muqdisho ( mareeg news ) Waxaa istaagtay isu socodka gaadiidka ee agagaarka isgoyska KM4 kadib markii ay halkaasi dibad-bax u xirteen darawallada Mooto Bajaajta.
Qaar ka mid ah wadeyaasha Bajaajta oo la hadlay mareeg ayaa sheegay inay ka cabanayaan jidadka xiran, iyaga oo ku dooday in amarka madaxweyne Farmaajo kadib ay ciidamada subaxdii furaan galabtiina xiraan.
sadii hore ayeey bajaaj leyda sidaan oo kale u banaan baxeen waxaana u tagay gudoomiyihii hore ee gobalka banaadir thaabit kasoo ku xaliyay in wadooyinka loo furaayo lama oga hada cida u imaan doonta lana hadli doonta si ay wadada u furaan.
Amarka madaxweyne Farmaajo Oo aan weli ka hirgalin muqdisho